Plasma 5.8.2 LTS ikozvino yawanikwa ne bug fixes | Linux Vakapindwa muropa
Plasma 5.8.2 LTS ikozvino yawanikwa neye bug fixes
Nhasi, Gumiguru 18, iyo nyowani yePlasma yaburitswa, Plasma 5.8.2 LTS, imwezve yekuchengetedza vhezheni pane vhezheni itsva apo vashandisi vanogona kuve nePlasma 5.8 LTS desktop yavo yakachengeteka uye yakasimba kupfuura nakare kose.
Iyi vhezheni inogadzirisa bugs dzakaonekwa muPlasma 5.8 asi kwete ese iwo, chimwe chinhu chichaitwa mune ramangwana rekugadzirisa, kuburitsa kunotarisirwa kuburitswa mumwedzi inotevera.
Iyo nyowani vhezheni yePlasma 5.8.2 inowanikwa asi isati yapihwa makuru eGnu / Linux, chimwe chinhu chichaitika munguva pfupi zvinoenderana nevakagadziri vekuparadzira.
Plasma 5.8.2LTS inogadzirisa zviputi zvakaonekwa zvine chekuita neNetworkManager, Plasma Workspaces, KScreen, KWin kana kactivitymanagerd. Bugs dzinozivikanwa uye dzakapasa yekutanga vhezheni vhezheni asi izvo zvinogadziriswa mune iyi vhezheni.
Plasma 5.8.2 LTS haizove yega yekuchengetedza kuburitswa kunze uko
Kusvika kumagumi mashanu ekuburitswa anotarisirwa, kuburitswa kunofanira kusunungurwa gore risati rapera, izvi zvinoita kuti ndifunge kuti iyo nyowani vhezheni yePlasma haina kunaka sezvinoita sekunge vhezheni huru yakaburitswa mavhiki mashoma apfuura uye patova nezviri kuburitswa zvekuchengetedza uye zvimwe zvekuburitswa zvinotarisirwa kuti zvisvike, saka mamwe mabhugi anozivikanwa kuti aripo mune inozivikanwa KDE desktop.
Vashandisi vanoshandisa kugovera kuburitsa kuburitsa Vachave neiyo nyowani Plasma 5.8.2 LTS vhezheni yemaawa mashoma anotevera, inotevera November 1 ivo vachave neiyo Plasma 5.8.3 vhezheni ine nhau. Aya ndiwo kunaka kwekugovera kuburitsa kuburitsa, kuti tikwanise kuwana iyo nyowani vhezheni yesoftware yega yega yatinoda pasina kuumbiridza kana kuisa iyo nyowani vhezheni isu.
Ini pachangu, handidi chaizvo KDE uye desktop yayo asi ndinofanira kubvuma izvo Plasma yanga iri shanduko hombe yepurojekiti yako uye iri desktop yakashanda zvakanyanya, saka yakashanda zvekuti isu tinokurumidza kutsvaga mabug fixes uye mhinduro kumatambudziko asingatarisirwe, chimwe chinhu chisingachaitike pane mamwe madhokotera seGnome kana Cinnamon. Asi Unosarudza chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Plasma 5.8.2 LTS ikozvino yawanikwa neye bug fixes
Rarama kwenguva refu kde, ari kuita zvikuru uye kutarisira zvakawanda zvinhu zvitsva kubva kwaari.
Zviripachena kuti kuve blog, maonero emunyori ndezvese, asi kureva kuti sezvo iine ongororo mbiri iri girini hazvishamise. Iwo akarongwa kudzokororwa uye ese software ane zvikanganiso zvinozivikanwa sezvazvinoshandiswa uye kwete nekuda kwechikonzero icho zviri zvakasvibirira.
Pindura kuna Maxi
Ubuntu Zesty Zapus, inotevera vhezheni yeUbuntu inogumisa arufabheti